फिफा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा परेनन् नेयमार, को बन्ला सर्वोत्कृष्ट ?
फिफाले वर्षका उत्कृष्ट १० पुरुष खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको सुचीमा ब्राजिल तथा पेरिसेन्ट जर्मिन पीएसजीका नेयमार भने अटाउन सकेनन् । २६ वर्षे नेयमारले विश्वकप फुटबलमा सोचे अनुसारको लेख प्रदर्शन गर्न नसक्दा ब्राजिल क्वाटर फाइनलबाटै बाहिरिएको…
धेरैलाई निराश बनाउने विश्वकपका रिजल्टहरु (भिडियोमा)
विश्वकपमा सबै खेल रोचकताले भरिएको हुन्छ । किन रु थाहा छ तपाईहरुलाई । विश्वकपको अन्तिम चरणमा खेल्न चाहने ईच्छा राख्ने राष्ट्रहरु नै २ सय भन्दा बढी हुन्छन् । २ बर्ष अगाडीदेखि नै फाइनल चरणमा सिट सुरक्षित गर्न धेरै नै चरण…
मन जितेका क्रोएसिया र खेल जितेका फ्रान्सले यसरी मनाए भव्य उत्सव
रुसमा सम्पन्न विश्वकप फुटबलमा क्रोएसिया च्याम्पियन बन्न नसकेपनि दोस्रो स्थानको उपाधि भने हात पार्न सफल भयो । तर, च्याम्पियन बन्न नसकेपनि विश्वको मन भने क्रोएसियाका खेलाडी र त्यहाँकी राष्ट्रपति कोलीन्डा ग्राबर किटारोभीचले नै जिते। फाइनलमा पराजित भएपनि क्रोएसियाकी राष्ट्रपति…
विश्वकप फाइनल चलिरहेका बेला मैदान प्रवेश गर्ने ४ जनालाई जेल सजाय
एजेन्सी । विश्वकप फुटबलको फाइनल खेल भइरहेका बेला मैदानमा प्रवेश गर्ने चार जनाले जेल सजाय पाउने भएका छन्। मस्कोको एक अदालतले खेल विथोल्न मैदान प्रवेश गर्ने ४ जनालाई १५ दिनको जेल सजाय सुनाएको हो। लुझ्निकी रंगशालामा फ्रान्स र क्रोएसियाबीच फाइनल…
आफुले छाता ओढेर पाहुनालाई किन भिजाए रुसका राष्ट्रपतिले ? यस्तो छ रहस्य
विश्वकप फुटबलको फाइनल खेलमा विभिन्न किसिमका रोमाञ्चक घटनाहरु भएका छन् । मैदानमा दर्शक कुद्नेदखि खेल सकिसकेपछि वर्षा हुँदा देखिएका दृष्यहरु पनि निकै नै हेर्न लायकको थियो । रुसमा आयोजित विश्वकप फुटबलको समापन कार्यक्रममा झमझम पानी परिरहँदा सबैले पानीमा रुझेर नै…
विश्वकप २०२२ हुने कतारका स्टेडियम यति भव्य छन्, हेर्नुहोस्
विश्वकपको २१ औं संस्करण सकिएको छ । फ्रान्सले क्रोएसियालाई फाइनलमा पराजित गर्दै ४ वर्षका लागि विश्वकपमाथि कब्जा जमाएको छ । अब अर्को विश्वकप २०२२ कतारमा हुनेछ । यो विश्वकपका लागि कतारमा भव्य स्टेडियम तयार हुँदैछन् । यी स्टेडियमहरु कतारका ७…
फ्रान्समा विश्वकप विजेता टोलीलाई देशकै सर्वोच्च सम्मान
बीबीसी । फ्रान्सले विश्वकप फुटबलको उपाधि उचालेका आफ्ना खेलाडीहरूलाई देशकै सर्वोच्च सम्मान 'लिजन दि अनर' प्रदान गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँको कार्यालयले फुटबल टोलीलाई सम्मानित गर्ने घोषणा गरेको हो। मस्कोमा आइतवार राति सम्पन्न निकै रोमाञ्चक खेलमा फ्रान्सले क्रोएशियालाई दुईका…
विश्वकप फुटबल : उपाधि फ्रान्सले जित्यो, तर विश्वको मन क्रोएसियाले
एजेन्सी । रुसमा सम्पन्न विश्वकप फुटबलमा क्रोएसिया च्याम्पियन बन्न नसकेपनि दोस्रो स्थानको उपाधि भने हात पार्न सफल भयो । च्याम्पियन बन्न नसकेपनि विश्वको मन भने क्रोएसियाका खेलाडी र त्यहाँकी राष्ट्रपति कोलीन्डा ग्राबर किटारोभीचले नै जिते। फाइनलमा पराजित भएपनि क्रोएसियाकी…
बीबीसी । इङ्ग्ल्यान्डका पूर्वडिफेन्डर रियो फर्डिनान्डले लियोनेल मेस्सी र क्रिस्चियानो रोनाल्डोले विश्वको उत्कृष्ट खेलाडीको स्थान फ्रान्सका युवा खेलाडी किलियन एम्बाप्पेलाई सुम्पन लागेको बताएका छन्। मस्कोमा भएको फाइनल खेलमा फ्रान्सले क्रोएशियासँग ४-२ ले जित्दा १९ वर्षीय एम्बाप्पेले आफ्नो देशको तर्फबाट विश्वकपमा…
फिफा विश्वकप फाइनलका सम्झन लायक ६ दृश्यहरु (फोटो फिचर सहित)
काठमाडौं । हिजो आइतबार फ्रान्स दोस्रो पटक विश्वकप फुटबलको विजेता बन्न सफल बन्यो । रुस विश्वकपको फाइनलमा फ्रान्सले क्रोएसियालाई ४–२ ले पराजितगर्दै २१ औं संस्करणको विश्वकप उपाधि जित्न सफल भएको हो । यसअघि फ्रान्सले सन् १९९८ को विश्वकप उपाधि हात…